Kirgistaan : Wadan dumarka tii la doono afduub lagu guursado: DAAWO - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kirgistaan : Wadan dumarka tii la doono afduub lagu guursado: DAAWO
Kirgistaan waxay ka mid ahayd jamhuuriyadihii ka mid ahaa dalkii weynaa ee midowga Soofiyeeti. Waxayna xornimo qaadatey markii midowgii Soofiyeeti burburey sanadii 1991. Waxase jirey dhaqan foolxun oo ay lahaayeen kahor inteyna ka mid noqon midowgii Soofiyeeti kaas oo ah in haweenka suuqa laga afduubto kadibna la guursado.
Haddase dhaqankaas ayaa soo laba kacleeyay kadib markii uu burburey midowgii Soofiyeeti. Dhawaan ayaa waxa ka dhacay bartamaha magaalada caasimada afduub loo gaystey gabadh 27 jir ah oo iyadu diidey inay guursato ninka xooga ku afduubtey kadibna wuu diley.
Madaxweynaha cusub ee loo doortey dalkaasi ayaa eryay taliyeyaasha booliiska oo ka gaabiyay baaritaanka dilkan foosha xun. Booliiska ayaa wacay ninka lagu tuhmayay dilka wuxuuna u sheegay inuu rabay inuu guursado, kadibna wuuba xirtey telfoonka sidaana waa lagu waayay.
Maalin kadib waxa la helay meydka gabadhii iyo ninkii diley oo kuwada jira gaadhiga dilaaga. Dhacdadaa naxdinta leh kadib waxa dadweyne badan isugu soo baxeen magaalada ayagoo dalbanaya in la mamnuuco dhaqabkan foosha xun.
Kirgistaan inkastoo ay badankoodu Muslimiin yihiin haddana waxba kama oga diinta Islaamka, waxayna u haystaan dhaqan ahaan. Wuxuu ka mid yahay dalalka ugu faqiirsan wadamadii hore ee midowga Soofeeeti.
Hoos ka daawo afduubka gabadhaas loo gaystey